Nyika apo ECG inoshanda yeApple Watch Series 4 yatovepo | Ndinobva mac
Nyika idzo ECG inoshanda kweApple Watch Series 4 yatovepo
Nokuburitswa kweshanduro 5.2 yeApple Watch, vakomana vanobva kuCupertino vaita basa rakamirirwa kwenguva refu kuti riite maelectrocardiograms kubva pachiuno chedu chero bedzi tine Apple Watch Series 4. Iri basa. yave kuwanikwa kuSpain, asi kwete chete, sezvo yasvikawo kune dzimwe nyika dzeEurope.
Hongu, zvakadaro Iwe unokahadzika maitiro ekumisikidza, kuti anoshanda sei kana chii chiri ECG, mumwe wangu Jordi anokutsanangurira iwe muchinyorwa chino. Iri basa pakutanga yaingowanikwa chete muUnited Statess, uye mumidziyo yakatengwa mudunhu reAmerica, zvaive zvisina basa kuchinja dunhu. Mwedzi mitatu mushure mekutanga kwayo muna Zvita, ikozvino yave kuwanikwa mune makumi maviri nyika nyowani.
Nokuburitswa kwewatchOS vhezheni 5.2 ikozvino inowanikwa mune 19 nyika dzeEurope kunze kweHong Kong. Kana iwe uchigara mune imwe yenyika dzinotevera, unogona kutanga kushandisa iri basa:
Kuti Apple yakwanisa kuwedzera nyika zhinji mumwedzi mina chete inokosheswa uye inofanira kupa tariro kune vese vashandisi vanofarira Apple Watch asi ndiani zvakadaro haugone kushandisa iyo ECG basa. Ramba uchifunga kuti basa iri rinofanira kuenda nenzira dzakasiyana dzinosiyana nyika nenyika.
Apple yakwanisa kumisa iyi nyowani ficha nekuti nyika dzese zvakavakirwa pamirayiridzo yakatemwa neEuropean Union, iyo yakabvumidza kupasa bvunzo dzesangano rimwe chete, kutanga iri basa munyika 19 pamwechete.
Zvichida, Apple inoramba ichishanda mune dzimwe nyika uko parizvino une Apple Watch Series 4 yekugona kupasa bvunzo dzakakodzera kuti ugone kumisikidza iri basa nyowani raive rimwe remabhuku makuru, pamwe nesaizi nyowani yescreen, yechina chizvarwa cheApple Watch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Nyika idzo ECG inoshanda kweApple Watch Series 4 yatovepo
Tsvina 4 mutambo wave kuwanikwa weMac